Gabar Soomaaliyeed oo Xubin Muhiim ka noqotay QM – Radio Daljir
Maarso 16, 2018 2:16 g 0
Xoghayaha guud ee Qaramada midoobay Antonio Gutters, ayaa Ilwaad Elman Cali Axmed u magacaabay inay ka mid noqoto la taliyeyaashiisa howl-gallada nabad ilaalinta caalamka ee Waddamada soo koraya.
Ilwaad oo haysata dhalashada Dalka Kanada ayaa Boggeeda Instagram-ka kusoo qortay sida ay ugu faraxsan tahay in xilkan loo Magacaabo.
Gabadhan oo 28 jir ah ayaa ku dhalatay Magaalada Muqdisho iyadoo ku barbaartay Dalka Kanada dhalashana ka qaadatay halkaas, waxanay ka mid tahay 4 Gabdhood oo uu dhalay Nabad jirahii weynaa ee Elman Cali Axmed.
Elman ayaa sidoo kale loogu yeeri jiray Aabbihii Nabadda Soomaaliya intii u dhaxaysay 1990-kii illaa 1996-dii, isagoo ku caan ahaa uruurinta Dhallinyarada nolosha ka dhacday, jiheynta Carruuraha danyarta iyo u hiillinta Nabadda.
Ilwaad iyo Hooyadeed Fartuun Aaden ayaa waxay ka mid yihiin howl-wadeennada sare ee hay’adda Nabadda iyo xuquuqul Insaanka ee Elman (Elman Peace and Human Rights Center) oo uu fadhigeedu yahay Muqdisho.